संस्करण 0.9.7.0 – फिक्स र सबै आसपास विशेषताहरु, र SuperProxy अल्फा
जुन 6, 2015 द्वारा Ofer2प्रतिकृयाहरु
नयाँ संस्करण यहाँ छ!
अपडेट गर्नुहोस्! गर्नुहोस्, अपडेट गर्नुहोस्! शीर्ष मा केही चीनी संग प्रसन्न.
तपाईं उन्नयन किन?
यो संस्करण गुगल प्रोक्सी समर्थन फिक्स, जो स्वचालित गुगल अनुवाद फेरि काम गर्नेछ मतलब.
यो संस्करण डाटाबेस ढाँचा अद्यावधिक, जो WordPress मतलब 4.2 समर्थित छ, र तपाईं वर्तमान तालिका आकार को ~ 40% बचत गर्न आषा गर्दै छन्
हामी बल्ल एक ब्याकइन्ड अनुवाद सम्पादक को थालनी संस्करण, यो तपाईं वास्तविक मान्छे अनुवाद गरेका तार देखाउन र तपाईं छिटो समीक्षा र ती मेटाउन अनुमति हुनेछ.
तपाईं कसरी अपग्रेड गर्नुपर्छ?
केही भाग्य संग, तपाईं बस आफ्नो WordPress ड्यासबोर्ड मा अपग्रेड गर्न विकल्प छ. यो तपाईं जगेडा सिफारिस, डाटाबेस अद्यावधिक समाप्त भएको छ पछि कुनै तरिका फिर्ता त्यहाँ छ रूपमा.
कुनै पनि quirks, मुद्दाहरू, समस्या – को हामीलाई फारम सम्पर्क आफ्नो मित्र छ.
के छ भनेर SuperProxy र किन यो सक्षम हुनुपर्छ?
SuperProxy हाम्रो नयाँ छ “धनी छिटो प्राप्त” योजना. हम्म…
वास्तवमा, हामी वेब वितरण पहुँच गर्न कम्पनीहरु र व्यक्तिहरूलाई अनुमति अन्त नोडहरु प्रयोग गर्दै. हामी यो यातायात लागि भुगतान गरिनेछ, तपाईं होस्टिंग सेवामा किनेको र यदि यति डाटा को टन तपाईँले प्रयोग छैनन् हस्तांतरण, हामी साँच्चै तपाईं यो सुविधा सक्षम कि ​​मूल्यांकन हुनेछ, यो हामीलाई समर्थन गर्नेछ र शायद आफ्नो जबकि लायक हुनेछ. तिनीहरूले उपलब्ध रूपमा हामी यस बारे विस्तृत विवरण प्रकाशित हुनेछ.
र – यस ChangeLog बाँकी गर्न:
Woo एकीकरण फिक्स
यस base64 सङ्केतन खाडल र अनुवाद पृष्ठ को आकार कम
गलत बक्स sizing प्रयोग गरिएको थियो जब विजेट फिक्स झण्डा सही देखाउन बनाउँछ
सामने अन्त प्रगति पट्टी को हटाउने, यो शायद देखेको वा प्रयोग र यो लायक थियो भन्दा अधिक मुसीबत कारण थियो
3 Bing द्वारा समर्थित नयाँ भाषा
स्थान shortcode ne_NP
गैर पाठ को अनुवाद जोगिन / json सामग्री केही डाउनलोड addon प्लगइनकालागि सवालहरू समाधान
प्लेसहोल्डर विशेषता समर्थन, धन्यवाद मर्कूस Serellis
व्यापार निर्देशिका प्लगइन गर्न केही सहयोग
त्यसैले – यो संस्करण Enjoy, र पराई हुन छैन, हामीलाई यो तपाईं को लागि काम गर्दछ कसरी थाहा दिनु.
न्यून दायर: विज्ञप्ति घोषणा, सफ्टवेयर अपडेट संग Tagged: Google अनुवाद, लघु, जारी
संस्करण 0.6.7 – अर्को कुरा के हो?
डिसेम्बर 18, 2010 द्वारा Ofer 23 प्रतिकृयाहरु
Transposh लागि अर्को कुरा के हो?
हिजो हामी संस्करण जारी गरेको छ 0.6.7. यो संस्करण केहि मामूली सुधार समावेश, दुवै Google सही स्रोत भाषा पहिचान छैन जब थप वाक्यांश अनुवाद गर्ने क्षमता लागि, र स्थिर फाइलहरू प्रत्यक्ष लिंक समावेश गर्ने क्षमता लागि (ती गर्नेछ एक 301 हुन लैजान).
तर के महत्त्वपूर्ण छ हामी अन्ततः सफा हाम्रो कोशेढुंगा गर्न सकेका छन् कि छ, र Transposh को अर्को प्रमुख संस्करण लागि पूर्ण गति मा गियर सेट – जो हुनेछ 0.7. यो संस्करण को ध्यान को अनुवादक फ्रन्टइन्ड इन्टरफेस एक प्रमुख सुधार हुनेछ, र हामी हाम्रो विकास साइट मा मा अनलाइन यो लागि अनुरोध गरेका छन् http://trac.transposh.org/wiki/milestones/0.7. अर्को संस्करण प्रभाव पार्न चाहन्छ कि सबै हाम्रो लागि टिकट सम्पादन र कि wiki पृष्ठ टिप्पणी वा सिर्जना गर्न स्वागत छ. हामी प्रत्येक पुनरावलोकन र अनुसूची मा यो फिट गर्ने प्रयास गर्नेछ.
केही अन्य समाचार मा, हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु कोलनेक्ट, आषा हो साइट एक बिट छिटो जाने बनाउने Transposh लागि एक नयाँ vps योगदान को लागि हाम्रो नयाँ प्रायोजक. हामी पनि हाम्रो सेवा सुधार गर्न cloudflare प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको छ, तर हामी संग मिश्रित परिणाम गर्दै छन्, यसैले तपाईंले यो साइट पहुँच कुनै पनि समस्या भएको छ भने, हामीलाई थाहा गरौं गर्नुहोस्.
एजेन्डा मा पछिल्लो, ब्लगर को लागि हाम्रो प्लगइनको अल्फा संस्करण कामहरू मा छ, तपाईं ब्लगर मा एक साइट हो र यो अनुवाद थप्न चाहनुहुन्छ भने, हामीलाई सम्पर्क.
न्यून दायर: विज्ञप्ति घोषणा, सफ्टवेयर अपडेट संग Tagged: 0.7, ब्लगर, Google अनुवाद, प्रमुख, लघु, जारी, Trac, WordPress प्लगइन